Filtrer les éléments par date : vendredi, 09 juillet 2021
vendredi, 09 juillet 2021 16:20
Mahanoro : Tonga ny fitaovana hanamboaran-dalana
Tonga any Mahanoro ny talata alina 06 jolay teo ny fitaovana vaventy hanamboaran-dalana.
Napetraka any amin’ny karieram-baton’i Saint Germain ihany koa ireo milina lehibe famakiana sy fitotoam-bato.
Ny Loholon’i Madagasikara voafidy tany Toamasina, mpandraharaha no sady Ben’ny tanànan’i Mahanoro teo aloha, Manasoa Donat Tang, no nampahafantatra izany.
Potika tanteraka ny lalana RN11A mampitohy an’i Mahanoro amin’ny RN2 ao Antsampanan’i Vatomandry.
Andaniana ora dimy be izao ny lalana mirefy 90 km ao Vatomandry ka hatrany Mahanoro noho ny faharatsiany.
Tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana no vita tara iny lalana iny.
Zara raha nisy ny fikojakojana taty aoriana, ary dia io izy potika ankehitriny io.
vendredi, 09 juillet 2021 14:00
Ambanisarika Distrika Ambovombe : Nitrangana fanafihana mitam-piadiana
Tokatrano iray tao Androhondroho Kaominina Ambanisarika, Distrika Ambovombe no notafihin’ny andian-jiolahy 07 mitam-piadiana ny 02 jolay 2021 tokony misasak’alina.
Lasan'ireo jiolahy tamin'izany ny volany mitentina 11 tapitrisa Ariary sy basim-borona iray cal 12, miampy ireo firavaka volafotsy 04 firava-behivavy iray boaty.
Naratra voafira famaky amin'ny lohany nandritra io fanafihana io ny zazalahy iray sy ny reniny izay voatoto vodibasy.
Nifarimbona tamin’ny fanenjehana ireo dahalo ny Zandary sy ny Fokonolona ka efa voasambotra ny 04 tamin'ireo 07 nanafika.
vendredi, 09 juillet 2021 13:41
Soamahamanina - Miarinarivo : Fora zaza niteraka vono olona
Lehilahy iray voalaza fa efa nandray zava-pisotro mahamamo no tonga tamina lanonam-pianakaviana, fora zaza, tao Antanetibe, Kaominina Soamahamanina, Distrikan’i Miarinarivo ny alahady 04 jolay 2021 alina.
Nifamaly sy nanakorontana tao amin’ny lanonana izy io, nentin’ny hamamoana.
Tezitra noho izany ny tompon-danonana ka niantso Fokonolona. Naratra mafy ilay lehilahy io vokatry ny fifanjevona nisy.
Tonga avy hatrany tao an-toerana ny Zandary rehefa nahazo fampilazana.
vendredi, 09 juillet 2021 11:40
Fandrobana tranombarotra : Olona dimy voasambotra tao Antsiranana
Nisy nandroba ny orinasa DADA TAMA MOTORS DIEGO ao Antsiranana ny alin’ny 17 hifoha ny 18 jona 2021. Very tamin’izany ny moto tricycle BAJAJ mbola vaovao, moto BOXER 150 ary finday marika SAMSUNG J2.
Nahazo loharanom-baovao ny zandary mikasika ireo olona ahiana ho nahavanona ny halatra. Naka fahazoan-dalana tany amin’ny Fitsarana ny zandary hahazoana manao fisavana trano.
Notanterahina ny 3 sy 4 jolay 2021 ny fisamborana sy fisavana, ka olona miisa dimy no voasambotra. Mpangalatra ny efatra ary mpividy halatra ny iray.
Hita tany Ambilobe ilay moto BOXER 150, tao Antsiranana ihany saingy efa voaravarava kosa ilay BAJAJ.
vendredi, 09 juillet 2021 10:52
Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy : 1 300 ny atontan-taratasy teo ampelantanan’ny CFM
Nisokatra ny alakamisy 08 jolay 2021 tao amin’ny ivon-toerany tao Ampefiloha Antananarivo ny fivoriana faharoa ny taona 2021 ny mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, tarihin’ny filohany Maka Alphonse.
Noho ny valanaretina Covid-19 izay nianjady teto amin’ny firenena dia nahemotra ity fivoriambe ity raha tokony ho tamin’ny volana jiona teo no nanantanterahana azy.
« Misy ny fifandranitana amin’ny samy mpanao politika, amin’ny gazety sy tambazotran-tserasera, mitarika fifankahalana izany. Ilaina ny fifampiresahana, ka izany ny nahatonga ny CFM hiroso amin’ny fananganana ny « espace de dialogue » na ny « espace de concertation », sehatra ifanakalozana hevitra sy handrosoana volavolan-kevitra ho fanatsarana ny fitoniana eto amin’ny firenena », hoy ny filohan’ny CFM Maka Alphonse.
vendredi, 09 juillet 2021 09:36
9 juillet : Journée de la destruction des armes légères.